Freddie Ljungberg Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
musha FOOTBALL MANAGER Freddie Ljungberg Childhood Nhau Untold Biography Chokwadi
LB inopa Nyaya Yese yeBlack Genius nezita rezita rokuti "Freddie". Yedu Freddie Ljungberg Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yezvinoitika zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hupenyu uye Kukura kwaFreddie Ljungberg. Image Credits: TheSunUK, DailyMail uye ArseWeb
Ehe, munhu wese anoziva kuti ndiye aimbova iyeye Arsenal legend uye underwear mhando ani panguva yekunyora, asimuka kuti ave mutungamiriri wekambani wenguva pfupi kuArsenal zvinotevera Unai Emery's saga. Nekudaro, vashoma chete vevateveri venhabvu vanofunga shanduro yedu yeFreddie Ljungberg's Biography iyo inonakidza kwazvo. Iye zvino pasina kumbopfuurira mberi, ngatitangei.
Freddie Ljungberg Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Nhoroondo Yemhuri uye Hupenyu hwepakutanga
Kutanga kubva, mazita ake azere Karl Fredrik "Freddie" Ljungberg. Freddie Ljungberg sezvo achidanwa chaizvo akaberekwa pazuva re16th raApril 1977 kuna amai vake, Elisabeth Bodil Ljungberg uye baba, Roy Alve Erling Ljungberg, muSweden, Western Europe.
Freddie ane mhuri yake kubva kunharaunda diki yeSweden inonzi Vittsjö (Vagari ve1,665 mu2010. Akapedza makore ekutanga e4 ehupenyu hwake munzvimbo yake yakanaka yekuzvarwa yeVittsjö padivi pevabereki vake uye mwana wemukomana anonzi Karl Oskar Filip Ljungberg.
Freddie Ljungberg akapedza makore ake ekutanga muVittsjo. Chikwereti: QX Sveriges största Gaysajt
Vittsjö iguta rakanaka reSweden rinozivikanwa munhoroondo kuti ive nzvimbo yehondo pakati peDenmark, Norway & Sweden iyo yakarwa ichidaidzira kuti ndeyayo. Waizviziva here? Yakanga iri mumvura yeVittsjö iyo yakashongedza Sweden King Gustavus Adolphus ndakapotsa ndanyura ndichibuda Danish mauto. Zvino, izvo Zvakwana renhoroondo !!
Mhuri Yacho: Freddie, zvakasiyana Zlatan, yaive nerombo rakanaka kukura kubva kumhuri yepedyo-yepamusoro mhuri. Waizviziva here? Baba vake Roy Alve Erling anogadzira mainjiniya ehurumende akazopinda ave yake yekuvaka uye yebhizimusi rezano. Amai vaFreddie Ljungberg amai vaElisabeth Bodil Ljungberg zvakare ipfuti huru muDhipatimendi reVashandi reSweden.
Mushure mekurarama muVittsjö 5 makore, mugore re1982, vabereki vaFreddie Ljungberg vakasiya maspita kuti vagare muHalmstad, guta rakapfuma riri pamuromo perwizi rweNissan, Sweden kumadokero kwemahombekombe. Kuedza kwemhuri kusiya Freddie kwekuzvarwa Vittsjö hakuna kufamba zvakanaka Freddie Ljungberg. Iye ane makore gumi nemana 5-makore ekuzvarwa akange anyatsodanana nenzvimbo yake yekuzvarwa aisada kuti mhuri yake yese ibve mutaundi kuHalmstad. Akapopotedzana nevabereki vake vakapfuma avo vasina kuona zvikonzero zvakawanda zvekusarudzo kwake kuti asare kumashure. Vakamubatanidza kwaari kubva paVittsjöall nzira yese kuenda kuHalmstad. Gare gare muhupenyu hwake, Freddie akaziva iro guta ndiko kwaakazogara pasi pekupedzisira
Kusiya Vittsjo kuguta hombe reHalmstad ndiyo yaive sarudzo yakanakisa yavakaitirwa nevabereki vaFreddie Ljungberg. Chifananidzo Chemifananidzo: Pinterest
Freddie Ljungberg Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Dzidzo neKubata Buildup
Halmstad yakave ine rudo guta reSweden rakanyatsokodzera kukotama, gorofu, kurovedza muviri, nhabvu, kushambira, tenisi, ice hockey, kiriketi uye yakawanda yemimwe mitambo. Ndichiri kuchikoro asa mwana, Freddie akagadzira tarenda rebasa remaoko. Izvo zvakasvika padanho apo tarenda rake rebhola remaoko rakazivikanwa neveSweden Nationalballball timu, fambiro mberi yakaona Freddie achidanwa kuti amiririre nyika yake. Achityisa, akaramba chikumbiro achisimbisa kufarira kwake kwaingova munhabvu chete.
Freddie Ljungberg Makore Ekutanga- Haana kungokwanisa kuramba bhora, achisarudza pakati pemitambo yese. Image Chikwereti: Instagram
Freddie aisakwanisa kuramba bhora pakati pedzimwe sarudzo dzemitambo. The mupfumi mwana aigona kurova chiyero pakati penhabvu uye kuwana mamakisi akanaka.
Freddie Ljungberg Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Basa Rokutanga Upenyu
Freddie Ljungberg's vabereki havana kutendeuka mukuda kuona mwanakomana wavo achizadzisa zviroto zvake zvemitambo. Vakamutsigira mukuda kwake kuwana bhora redzidziso neHalmstads BK kwaakawana kunyatsobudirira kunyorwa nekirabhu yevechidiki setup yakadzidziswa naOlle Eriksson.
Freddie Ljungberg Makore Ekutanga neHalmstad. Chikwereti: Arseweb
Freddie Ljungberg akakurumidza kuita fananidzo nekirabhu. Akafadza mudzidzisi wake wevechidiki Eriksson uyo akambotaura kuti mukomana ainyanya kutaridzika kupfuura tarenda rake. Nyeredzi yekuSweden yekuzvarwa yakanga yakanaka kwazvo zvekuti dzimwe nguva angave achifunga nezvevamwe vatambi uye pazviitiko zvishoma, kunyangwe vavengi vake. Waizviziva here? mudiki Ljungberg mune yake ukuru dzimwe nguva aipfuura bhora kushamwari dzake kuti vazove nemukana wekukora.
Pazera re12 pagore Mune 1989, aive ave kutoona sezveramangwana rebhola reSweden. Mukuda kuFurrack kufambira mberi kwake, Freddie akaedza kunyengerera Halmstads BK kuti imusimudze nhanho mbiri kumusoro dzevechidiki (kubva p12 kusvika p14) iyo yaipesana neclub sera panguva iyoyo.
Ljungberg achitamba nhabvu neHalmstads BK aive zvakare ari pamusoro pezvidzidzo zvake. Akaita zvakanaka muzvidzidzo zvekupasa, achipedza 9th grade. Waizviziva here? Magiredhi ake echikoro anoratidza pakati 4.1 pane 5-point seka.
Freddie Ljungberg Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Haangave Jack wezve maGrade ese: Pa18, Ljungberg yakatoitwa nechikoro chesekondari uye iri padanho rekupedzisira nhabvu yake yebhola. Kunyangwe iwe yaive pfungwa muhupenyu hwake yaida kushingairira kushandira kune rimwe basa, tenjie Ljungberg achiri kuda kuenderera mberi dzidzo yeyunivhesiti uye kutamba nhabvu yepamusoro. Muchokwadi, akagamuchirwa kuyunivhesiti kwaakatanga kudzidza tekinoroji yeruzivo uye zvehupfumi.
Munguva pfupi, Ljungberg yakatanga kupera simba. Akaona kuti haasi munhu wepamusoro aigona kutarisisa zvese kuyunivhesiti kunetseka uye nhabvu yepamusoro panguva imwe chete. Akanetseka zvakanyanya kuti arwe pakati pechinzvimbo chake chedzidzo nguva yekuzvidzikisira nekuzvipira kwekuva mutambi wenhabvu. Mushure mekukurukura nenhengo dzemhuri yake, anoshanda zvakanyanya akasarudza kusiya yunivhesiti kuti atarise nhabvu.
Ljungberg mushure mekusiya yunivhesiti yake akazoenderera mberi kuita danho repamusoro pa23 Gumiguru 1994. Nechekuzvinetsa gore mune yake nyanzvi yekutanga, uyo ane tarenda wechiSweden akatanga kufadza vashandi vake. Akaenderera mberi kubatsira Halmstad kuhwina iyo Svenska Cupen mu1995 uye iyo Allsvenskan (chiSwedish nyanzvi yeligi ligi) mune gore 1997.
Freddie Ljungberg's akakunda moyo yevarairidzi vake pavaive muHalmstad. Mufananidzo Wekodhi: Flickr
Basa raFreddie rinonakidza mukukunda iyo inyanzvi yekuSweden ligi rakaona zvikwata zvekunze; zvinofarirwa neFC Barcelona, ​​Chelsea, Aston Villa, Parma neArsenal vese vachikumbira kuti asayine.
Freddie Ljungberg Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Kumuka Mukurumbira Nhau
Pakati pevarairidzi vese, yaive Arsène Wenger, (iye akangwara purofesa) uyo akatora danho risinganzwisisike rekutendera kusaina kwaFreddie (£ 3m) kunyangwe asina kumuona achitamba achirarama. Wenger aingotarisa Ljungberg paTV asi akavhunduka iwo the the spiky bvudzi rakatsvuka mukomana uyo airatidzika Johnny Rotten achibatana nechikwata chake.
Ljungberg ndiye aive akanakisa munyika yokumusha kwake (Sweden) asati ava neruvara mune shorts dzeArsenal. Credits: Picuki
Ljungberg pasina imwe nguva akazviratidza iye neArsenal pasina kuoma sezvo akangotanga kubhururuka pasi nemapapiro eHighbury. Hazvina kumbotora nguva iye asati akombaiyo cult gamba pakirabhu. Freddie akafarikanya kudyidzana kwakasimba kwazvo Thierry Henry uye nechero humwe hukuru hwakakunda kubva panguva yaakajoinha kirabhu.
Freddie Ljungberg aive nekubatana kunotyisa naT Thierry Henry panguva yake kuArsenal. Image Chikwereti: countypress
Nguva yakanakisa yaFreddie yeArsenal yakauya apo akabatsira kirabhu kukunda yavo yechipiri Premier League neFA Cup kaviri uye zvakare, achiva chikamu cheArsenal 2003-04 'Zvinopinda'Squad, Zvinotonyanya kukosha, mukomana wegoridhe weAgoridha ndiye akave rekodhi muridzi we2001 / 2002 Premier League Player yeMutambo uyu.
Freddie Ljungberg pakukwirira kwepamusoro kwemasimba ake neArsenal. Mufananidzo Credits: arsenalpics, Arsenal Official uye PL25years
Panguva yaakaenda pamudyandigere, ingano yeArsenal yakanga yakunda mukwikwidzi weSweden yegore re5 nguva mumutsara (2001, 2002, 2003, 2004, 2005). Akahwina zvakare mutambi weSweden wegore (2002 & 2006) uye yakaiswa 11th muArsenal.com's Gunners 'Greatest 50 Players.
Mushure mekurara pamudyandigere, kuda kwaLjungberg kune dzidzo kwakamuona achitora kudzidzisa dzidzo kwaakanyanya. Pa 12 Chikunguru 2016, akabatana neAlexander's Academy kudzidzisa kirabhu ye Under-15s. Kuchenjera kwaLjungberg kwakamuona achifambira mberi nebasa rake rekudzidzisa nemubatsiri weVfL Wolfsburg (2017), Arsenal U23 uye zvakanyanya zvinoshamisa, achive murairidzi wepamberi weArsenal pa29th yaNovember 2019. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Freddie Ljungberg Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Ukama Hupenyu
Kutanga kubva pagore 2000, Freddie akatanga kuva nehukama uye kusangana nevakadzi. Pakati pe2000 kusvika 2008, aizivikanwa kuti aive nevasikana ve8 kureva; (1) Stephanie Saunders (2000), (2) Denise Lopez (2002 - 2003), (3) Lauren Goridhe (2004 - 2005), (4) Madeliene Lexander (2005), (5) Louisa Lytton (2006), (6) Gia Johnson (2007), (7) Jamie Gunns (2008) uye (8) Natalie Foster (parizvino mukadzi wake panguva yekunyora).
Freddie aive nehukama uye akasangana nevakadzi ve7 vasati vagadzikana. Chikwereti: WhoDatedWho
Freddie akasangana nerudo rwehupenyu hwake Natalie Foster (Kwete: 8) mu2007, gore raakasiya Arsenal kuWestham. Musikana webasa anozova mukadzi anouyawo achibva kuimba yakapfuma. Waizviziva here? Natalie ndiye mwanasikana wemabhizinesi mukuru uye anozivikanwa weLondon taxi tycoon Daryl Foster. SaFreddie, iye zvakaresocialite'- anozivikanwa munharaunda yeBritish yemafashoni.
Mushure mekumirira kwenguva refu, vachiri kufambidzana, shiri mbiri dzerudo dzakasarudza kuroora pa9th yaJune 2014, pamhemberero pamberi peiyo Natural History Museum, London.
Freddie Ljungberg Muchato wemuchato naNatalie Foster. Chikwereti: Instagram
Vose Freddie naNatalie vakagamuchira vana vaviri Aria naBillie Ljungberg mushure mewanano yavo.
Freddie Ljungberg Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hwehupenyu
Kuziva Freddie Ljungberg Hupenyu hwega hwaizokubatsira iwe kuwana mufananidzo uri nani wehunhu hwake kure nebhola. Ljungberg akambozviratidzira semuenzaniso, basa raaida kusanganisa nebhola. Kare ikako, iye akafananidza marudzi ese emuviri uye zvipfeko zvekupfeka zvehofori dzaKalvin Klein.
Freddie Ljungberg Hupenyu hweMunhu kure nebhola- Akambowana mukurumbira mukuru muModelling. Credits:IMDb, Zuva uye Pinterest
Waizviziva here? Kuve nehunhu hwemuviri; inotonhorera chiseled AB, yakakwirira masokisi, uye kufungisisa kutarisa yakaita vakadzi vazhinji vakadziwirwa pamusoro pake, chikonzero aive nehukama hukama panguva yake kuArsenal. Achitaura nezve chiitiko ichi nevakadzi pamazuva ake ekuenzanisira, Freddie akamboudza bepa reSweden Di (Chirevo cheZuva);
“Kunyangwe zvichinzwika senge neni uye ini, handisi kuzochema. Semuenzaniso…, Kana ndichienda kumakirabhu eusiku, vasikana vaiuya vobata yangu cr ** tch. Saizvozvo!!!. Ehe! Izvo zvaiitika kwese kwese. Dzimwe nguva, vaibva kumashure, kudivi uye kudhonza kwandiri. Chikamu chakanyanya ndechekuti ini handigone kuita chakashata nezvazvo. Pandakabvisa maoko nehasha, vanhu vakangoseka. ”
Ndosaka zvisingazivikanwe kuti Freddie anozivikanwa seEngland se * iest nhabvu yenhabvu nekuda kweakajairwa kuita modelling basa.
Freddie Ljungberg Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Lifestyle
Kusvika pakuziva nzira yaFreddie Ljungberg kwaizokubatsira kuwana mufananidzo wakazara wehupenyu hwake hwekugara. Pasina kupokana, Ljungberg murume akapfuma - aine mari inofungidzirwa kunge yakapoterera £ 8m. The mukomana anotonhorera anozivikanwa vese pamusoro peLondon London mararamiro ake ekunze, mumwe anozivikanwa nyore nyore nemotokari dzake dzinopenya.
Freddie Ljungberg Mota inoratidza anogara hupenyu hwekunze. Image Chikwereti: Instagram
Nhoroondo yeArsenal yakaonekwa yakadzika, ichityaira kuburikidza neNorth London muFerrari 360 Spider, inotakura mutengo wemakiromita anosvika $ 85,000- £ 90,000. Akave akaratidzwazve (mugore re2013) akagara mubot reRange Rover yake achidya mundiro yechikafu padivi nembwa yake, Amadeus.
Freddie Ljungberg haana kana nyaya yekudya kwake mubhodhi muRange Rover yake. Chikwereti: Zuva
Vatambi venhabvu, sevamwe vedu, tinoda mhuka dzinovaraidza uye Freddie haisi imwe nzira. Kunyangwe iwe uriko kutaura kwekuti hakuna kuvimbika kwakasara mumutambo wanhasi, zvirokwazvo hazvifunge nezvehukama hwakagovaniswa pakati paFreddie nembwa yake, Amadeus. Mufananidzo uri pazasi unopfupikisa mararamiro ekuzvininipisa aFreddie. Akangobiwa nehope achingopemberera rimwe remazuva ake ekuzvarwa.
Freddie Ljungberg akarara kubindu rake rakanaka padivi peshamwari yake yepamoyo- Amadeus.
Freddie Ljungberg Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Untold Facts
Freddie Ljungberg Tattoos: Waizviziva here? Freddie anga aripakati pechizvarwa cheavo vatambi vekufamba-famba vakatanga kukumbira hunyanzvi hwemuviri munguva yekupedzisira 90s uye yekutanga 2000s. Kare ikako, maSweden anofarira kuhukura dema rake rekati tato pachiuno chake paakaita modelling nebhurugwa rake. Iyi tattoo yaive yakagadzirwa muLos Angelos inonzi yakatora maawa masere kuti ipere. Sezvinoonekwa pazasi, ane imwezve LA yakagadzirirwa tattoo iyo inoratidza chitendero chake (Chikristu) paruoko rwake.
Freddie Ljungberg Tatoo & yakakonzera Denda. Image Chikwereti: Zuva
Akambofungidzira kuti ane HIV-AIDS: Around 2005, Freddie akatanga kushaiwa akakosha mitambo nekuda kwekuenderera mberi kukuvara kwehudyu. Mushure mekufungidzira kuti anofanira kunge akabata chirwere, akaenda kunoongororwa (kusanganisira rubatsiro pamwe nekenza) kuti awane chaakonzera matambudziko. Zvinotyisa, akabvunzwa aine maitiro mashoma pane rimwe remateti ake. Freddie akavhiya muchiuno kuti abvise gonyeti rakapiswa mumuviri wake. Mumashoko ake maererano thesun;
“Ndatya. Ndakaedzwa zvakasiyana, asi hapana munhu, kunyangwe ini pachangu zvaiita senge zvaiziva chii kwandiri.
Ndakanetseka chaizvo. Ini handina kumbonzwa kurwara kana kurwara, asi of course, ndaiziva kuti ndakakuvara mukati. Pakupedzisira, vanachiremba vakazoona kuti pane chimwe chinhu mumatato angu. Ndakagadzikana kuti vakagadzirisa dambudziko ... ini ndafamba izvozvi. "
Freddie Ljungberg's Nickname: Waizviziva here? Asati atamira kuenderera mberi nhabvu yake kuEngland, aive achizivikanwa se "Karl Fredrik Ljungan ” uye Kwete "Freddie Ljungberg". Nekudaro, achitamba Arsenal, aipa zita rekuti "Freddie", Zita risingawanzo kushandiswa mune yake yekuSweden."
An XBox Gamer: Freddie mumwe munhu waungasaziva iwe mutambi. Kure nenhabvu, anofarira kushamwaridzana neshamwari yake yakanaka Ruud Gullit (aimbova maneja wechiDutch maneja uye mutambi wenhabvu). Vaviri shamwari havadi chinhu kupfuura kurasikirwa kwemaawa mashoma kuenda kuFIFA pamitambo yeXbox uchisungirirwa mumahara.
Freddie haadi chimwe chinhu kunze kwekutora Xbox mutongi achipesana neshamwari yake yakanaka- Ruud Gullit. Chikwereti- Twitter
Nhoroondo dzenyika: Waizviziva here? Ljungberg ndiye mutambi wekutanga kurovera mugomo mumutambo weFA Cup kunze kweEngland. Akavawo mutambi wekutanga mumakore 40 kuwana mamakisi akatevedzana eFA Cup. Mune zvese, iye akabata 9 kirabhu uye 16 somunhu kukudzwa kuzita rake. Tarisa uone basa rake rinokudzwa pazasi.
Freddie Ljungberg Kirabhu uye Kukudzwa Kwemunhu Mumwe nemumwe. Credits: Wikipedia uye ArsenalNews
Freddie Ljungberg Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri
Freddie haawanzo kutaura nezve kana kuratidza vabereki vake kana nhengo dzemhuri munhau. Saka zvinofungidzirwa kuti baba vake naamai vake parizvino vanogara munzvimbo yakapfuma yeHalmstad yeSweden kwaakatanga nhabvu. Kubva pane zvazvinoita, inoratidzawo nhengo dzese dzemhuri kusanganisira hama yake Karl Oskar Filip Ljungberg vane vakaita sarudzo yekuziva kusatsvaga kuzivikanwa neruzhinji.
Nguva yekupedzisira iyo media yekubatira mhuri yake yaive inopfuura makore gumi apfuura, iri nguva baba vake pavakapinda muneimwe dambudziko. Kunyatso pa19th yaKurume, 2008, baba vaFreddie Ljungberg vakapomerwa r * pe uye se * ual kushungurudzwa. Ichi chaive chidimbu chemashoko akashata chakazoita kuti iyo legend yeArsenal iparadzwe (TheMirror 2008 mushumo. Roy akasungwa pamusha wemhuri muSweden uye akapedza husiku hutatu muchitokisi chemapurisa cheHalmstad asati aburitswa.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Freddie Ljungberg Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusasarura. Kana iwe ukawana chimwe chinhu chisingaratidzika sezvakanaka, tapota tigovera icho isu nekupindura pazasi. Isu tichagara tichikoshesa uye nekuremekedza mazano ako.
Swedish Football Diary
Bukayo Saka Zvechikoro Chemwana Plus Untold Biography Chokwadi
Andriy Yarmolenko Vana Vechidiki Nhoroondo uye Untold Biography Chokwadi
Donyell Malen Childhood Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Reiss Nelson Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Joe Willock Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Mesut Ozil Childhood Nyaya yezve Untold Biography Facts
Ian Wright Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts
Alexis Sanchez Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
John Terry Mwana Wenyaya Nyaya Yacho Plus Untold Biography Facts
Ashley Cole Childhood Nyaya yezve Untold Biography Facts